ကလေးငယ်များကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေက အထောက် အကူဖြစ်စေသလဲ ?
ကလေးအသက်ပထမ(၈)နှစ်အရွယ်အထိ ကလေးဘ၀သည် အခြေခံအားဖြင့် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအရွယ်များသည် အနာဂတ် ကျန်းမာရေး၊ ကြီးထွားမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကျောင်းအတွင်း၊ မိသားစုအတွင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း၊ သာမန်ဘ၀အတွင်း အောင်မြင်စွာ သင်ယူတတ်မြောက်ခြင်းစသည့် ကလေးအနာဂတ်ဘ၀၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ပင်ဖြစ်သည်။
လတ်တလော သုတေသနပြုချက်များအရ ကလေး၏ ပထမ(၈)နှစ်အရွယ်သည် ကလေး၏ အသိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကအရေးကြီးသည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကလေးအသက် ပထမ(၃)နှစ်အရွယ်သည် ကလေးဦးနှောက်ကို ပုံဖော်နေသည့်အရွယ်ဖြစ်သဖြင့် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးငယ်များကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေက အထောက်အကူဖြစ်စေသလဲ ?
၁။ ကလေး၏ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကာလတို့သည် ကလေး၏ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကလေးများ အာရုံခံစားမှု မှန်သမျှ သည် စဉ်းစားခြင်း၊ ခံစားခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် သင်ယူလေ့လာခြင်းများအတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဥာဏ်ကို ပုံသွန်းလောင်းရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
၂။ ကလေးများသည် မွေးဖွားပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လျင်မြန်စွာလေ့လာသင်ယူကြသည်။ ဂရုဏာနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသူ မိဘများနှင့် အခြား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသူများထံမှ ကောင်းမွန်သည့်အာဟာရ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတို့အပြင် ကြင်နာယုယမှု၊ ဂရုစိုက်ခံရမှု၊ ချော့မြူနှိုးဆွပေးမှုများ ရရှိခဲ့လျှင် ကလေးများသည် အကောင်းဆုံးကြီးထွားခြင်းနှင့် ကောင်းစွာလေ့လာသင်ယူကြမည် ဖြစ်သည်။
၃။ ကလေးများကို ဆော့ကစားရန်နှင့် စူးစမ်းရှာဖွေမှုပြုရန် အားပေးခြင်းသည် လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှု၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့် ဥာဏ်ရည် ထက်မြက်မှုတို့တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် သင်ယူတတ်မြောက်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ဤအချက်များသည် ကလေးများကို စာသင်ကြား စေရန် အဆင်သင့် ဖြစ်စေပါသည်။
၄။ ကလေးများသည် သူတို့နှင့် အနီးစပ်ဆုံးရှိနေသူများ၏ အမူအကျင့်များ(လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရမှုများ)ကို အတုယူ၍ ပြုမူလေ့ရှိကြပါသည်။
၅။ ကလေးငယ်များကို အချိန်ကိုက် ကျောင်းထားခြင်းသည် ကလေးငယ်များ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆက်လက်ရှင်သန်စေပါသည်။မိဘများ၊ အခြားပြုစု စောင့်ရှောက်မှုပေးနေသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။
၆။ ကလေးတိုင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တူညီကြသည်။ သို့သော် ကလေးတစ်ဦးချင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုနှုန်းသည် သူတို့တစ်ဦးချင်း၏ လှုပ်ရှားမှုပေါ် မူတည်ပါသည်။ကလေးတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် စိတ်ဝင်စားမှု၊ ပင်ကိုယ်စရိုက်၊ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ပုံစံနှင့် သင်ယူတတ်မြောက်ရန် ချဉ်းကပ်မှုများတွင် ကိုယ်ပိုင်ပုံစံများ ရှိတတ်ကြပါသည်။